Mkpado: bmw logo | Martech Zone
Mkpado: bmw logo
The History na Evolution nke Automobile Logos
Wednesday, April 29, 2015 Tọzdee, Eprel 30, 2015 Douglas Karr
Visual mata bụ ihe dị mkpa karịa ọtụtụ ndị kwere. Akara anaghị anọchite anya akara, ọ na-enwe ọtụtụ nkọwa ma nwee ike ịchọta akụkọ ihe mere eme nke ụlọ ọrụ. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eguzogide ịgbanwe akara ngosi. Ha nwere ike ịbụ na ha ejirila ọtụtụ ego tinye ego, ma ọ bụ na-echegbu onwe ha gbasara ego na mbọ achọrọ mgbe a na-edegharị aha. M kwenyesiri ike na-eme ka mma na gị logo na-ya abụọ
Monday, August 29, 2011 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
Kemgbe izu ụka, agbanwere m isiokwu WordPress m na iri abụọ na iri na otu. Apụrụ m ikwu n’eziokwu na obi dị m ụtọ na imepụta ya ugbu a. Emebela m ya ka ọ masị m, anaghịkwa m emetụ koodu ahụ aka. Ugbu a emehiela m, enwere oge mgbe m na-enwe mmasị ịmị mmiri n'ime isiokwu ma na-egwu ya, mana ịde blọgụ siri ike dịka ọ dị. Achọghị m nrụgide ọ bụla